प्रधानमन्त्री देउवाको बेवास्ताले दशवर्षे कर्णाली विकास योजना अलपत्र - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
योजनामा दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढी र हुम्लाको सिमीकोटदेखि हिल्सा जोड्ने दु्रत सडक निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । सुर्खेत–जुम्ला खण्ड, जुम्ला–गमगढी खण्ड र गमगढी–सिमीकोट–हिल्सा खण्डमा द्रुतमार्गलाई तीन खण्ड विभाजन गरी निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसैगरी, योजनामा सडक र विमानस्थलबाट पहुँच पुग्न नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायातको सुविधाका लागि केबलकार र रोपवेमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र पर्यटक एवं व्यापारीको सहज आवगमनका लागि विभिन्न स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । हुम्ला–कर्णाली, जवानदी, तिला नदी, मुगु–कर्णाली, ठूलीभेरी, कालिकोटदेखि चिसापानीसम्म र्‍याफ्टिङ वा स्केटिङ गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ ,आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कांग्रेस संघीय संरचना:अब प्रदेश समिति शक्तिशाली कि जिल्ला ?
काठमाडौं । कांग्रेसले संघीय संरचनाअनुसार विधानको मस्यौदा गर्दा केन्द्रपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी निकाय […]
काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्ष कार्यकाल बढाउन पार्टीको महासमिति बैठक पछि धकेल्न खोजेको भन्दै […]
नेकपाभित्र नेकपाभित्र दृश्य-अदृश्य रूपमा गुटैगुट, को कसका छन् गुट ?
काठमाडौं । पार्टी निर्णयमा शीर्ष नेताकै असन्तुष्टि देखिनु नेकपामा नौलो कुरा हुन छाडेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ […]
हिँड्दैछ पाईला मेट्दैछ ! उल्टिए प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका आफैं निर्णय
काठमाडौं । हिजोआज देश जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसको प्रमुख र एउटैमात्र कारण हो सरकार। जो आफैं निर्णय […]
‘कांग्रेस सकिने भएपछि आत्तिएर मार्सी चामलको विज्ञापन गरेर हिँड्यो’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारको लोकप्रिय […]
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा केन्द्रीय कमिटीभन्दा तलका कमिटीहरूमा दुईजना मात्र पदाधिकारी […]